Izindawo ezihamba phambili zezinja | Izinja Umhlaba
Izindawo ezihamba phambili zezinja
Amapaki ezinja, abizwa nangokuthi ama-corrals, ayindlela ewusizo kakhulu esivumela ukuthi sikwazi ukulawula isilwane sethu noma sivumele nezilwane eziningana ukuthi zidlale endaweni elinganiselwe. Yize kusobala ukuthi akukhuthazwa ukuthi ubashiye bekhiyiwe usuku lonke ngaphakathi kwala mapaki, ngokungangabazeki bayindlela enhle ngezikhathi ezithile, lapho sibashiya bodwa ekhaya noma ngabe sibabeka ekamu noma sihamba izintaba.
Mhlawumbe yingakho omunye wemisebenzi ebaluleke kakhulu emapaki ezinja ukuthi ngabe angagoqeka, noma uma zingabekwa ngaphakathi noma ngaphandle kwekhaya, ngoba futhi zilusizo kakhulu ezindaweni ezivulekile ezifana nezingadi noma kuvulandi. Kulesi sihloko sizobona okuhle kakhulu, futhi, sincoma ukuthi ubheke lesi sihloko mayelana abathwali abahle kakhulu bezinja ezinkulu, esinye isesekeli senkanyezi.
Iris Ohyama, Ipaki ye ...
Ama-Amazon Basics - Indawo yokudlala ...
Pawhut Metal Ucingo ...
I-FEANDREA Dog Cage,...
Ukugoqa okugoqiwe kwe ...
ISITOLO SEBIGWING ...
1 Khipha ku-internet Dog Park
1.1 Inkundla yokudlala esongekayo ngobukhulu obuhlukahlukene
1.2 Amapaki amakhulu ezinja
2 Amapaki ezinja ezincane
2.1 Amapaki ezinja ezisongekayo
2.2 Izinja zipaka ekhaya
3 Yini amapaki ezinja?
4 Amathiphu lapho ukhetha ipaki yenja yakho
4.1 Uzoyibeka kuphi ipaki
4.2 Usayizi wenja yakho
4.3 Uhlamvu lwesilwane sakho sasekhaya
4.4 Okuthandwa nguwe
5 Ungathenga kuphi amapaki ezinja
6 Ukubuyekezwa kwamapaki wezinja zasekhaya
Khipha ku-internet Dog Park
Inkundla yokudlala esongekayo ngobukhulu obuhlukahlukene
Inkosi ephelele yamapaki ezinja e-Amazon le modeli itholakala ngosayizi abahlukahlukene (esinye sezithombe siyisiqondiso esisebenzayo sokukusiza ukhethe okufanele inja yakho kakhulu) noma ungenawo umnyango. Ihlangana ngemizuzwana, njengoba nje kufanele uxhume ama-panels ndawonye, ​​awudingi ngisho namathuluzi! Ngaphezu kwalokho, inesiphetho esimnyama sensimbi futhi ingasetshenziswa ngaphakathi nangaphandle (ifaka izinti eziyisishiyagalombili ukuyiphakamisa kangcono emhlabathini).
Ngaphezu kwalokho, lapho kufanele uyilondoloze, kulula futhi: amafolda afana ne-accordion futhi, lapho igoqwe ngokuvundlile, ayithathi ndawo.
Njengephuzu elibi, abanye abasebenzisi baphawula ukuthi isilwane sabo singadonsa ipaki uma singacwiliseki kahle emhlabathiniNgalokho umsebenzi wayo ungaphakathi, kuya ngesilwane sasekhaya nohlobo lwesitezi onaso, kungaba yinkohliso ngandlela thile.
Amapaki amakhulu ezinja
Isitayela se-BIGWING-Park ...
Ifana netende noma ichibi lensimu elingenamanzi, le paki enkulu yezinja iyindawo ethokomele, epholile futhi ethambile engasetshenziswa njengendlu yezinja. Ngaphezu kokuba nobukhulu obucishe bube bukhulu (engxenyeni yayo ende kunazo zonke ilinganisa u-125 cm), ipaki linezingxenye ezahlukahlukene ezingabekwa noma zisuswe, njengoba ufisa, ngakho-ke, isibonelo, gcina isilwane sakho sivikeleke kakhulu, sipholile (ukususa noma ukuvula uziphu eminyango namawindi) futhi nokuvimbela ukungena komiyane (sibonga amanetha omiyane akhelwe ngaphakathi). Ngaphezu kwalokho, iyasuswa futhi inggoqwa, ukuze ukwazi ukuyigcina kalula. Noma kunjalo, ngenxa yokwakheka kwayo kwensimbi kungumkhiqizo ozinzile kakhulu.
Abasebenzisi baphawula iphuzu elilodwa kuphela elibi: ezinye izinja zikwazile ukudabula indwangu, nibble on uziphu noma ngisho ukubhoboza epaki.
Amapaki ezinja ezincane
I-MC Star Park ephathekayo ...
Ngokufana nepaki langaphambilini, sithola le modeli yendwangu, futhi egoqekayo futhi enomumo o-octagonal, owakhiwe ngendwangu engazweli futhi engenamanzi kanye nensimbi. okunikeza ipaki ukuzinza okukhulu. Ngenxa yoziphu bayo abaningi nezendlalelo, kuyindlela enhle uma ufuna ukugcina inja yakho ingashisi ehlobo futhi ivikeleke ebusika. Ngaphezu kwalokho, kuhambisana nezinye izipikisi zokuyikhonkoshela enhlabathini (sengathi itende). Ekugcineni, kulula kakhulu ukuyihlanza (yize isisekelo singahlukanisi), nge-mop ne-voila!
Amapaki ezinja ezisongekayo
IPawHut Dog Park ...
Into egoqekayo, enhle ngaphandle nangokhetho olungabizi kakhulu phakathi kwamapaki wezinja ahlukile yile playpen yensimbi enezicucu eziyisishiyagalombili nokuthi kulula kakhulu ukuhlanganisa nokuqaqa. Igcina ivundlile yokonga isikhala futhi yenziwa ngensimbi enengubo emnyama yokuvikela ukugqwala. Lokhu, ngaphezu kwalokho, kunesici sokuthi kungafakwa kumumo o-octagonal, isikwele noma unxande, ongayivumelanisa nayo nendawo ozoyisebenzisa kuyo, futhi inomnyango osebenzayo kwenye izinhlangothi.
Yebo, Abasebenzisi baphawula ukuthi kungaba buthakathaka ngezinja ezinkulu zokuzalela, ngoba ilula kakhulu kangangokuba ihamba kalula.
Izinja zipaka ekhaya
Noma, uma ufuna ukusebenzisa ipaki yezinja ekhaya, kungcono ukukhetha inketho yendwangu njengalena ukugwema imihuzuko phansi (noma ngisho nokuthi izinja ziyaphunyuka). Leli lifaneleka ngokukhethekile ngoba alinawo umklamo omuhle kuphela, kodwa futhi lineminyango emibili, izindwangu ezinamanethi omiyane nendwangu emelana kahle.
Ngaphezu kwalokho, kuyimodeli ethakazelisa kakhulu ngoba Ingathathwa futhi nasohambweni lwamatende noma ohambweni lokubonga ngokugcinwa kwalo okugoqekayo nokululaKubandakanya ama-spikes ukuyilungisa phansi ngisho namapokhethi athile ezinhlangothini ukuthwala amathoyizi, imiklomelo ...
Yini amapaki ezinja?
Amapaki ezinja awusizo olukhulu kulabo abahlala endlini nesilwane, ngoba bavumela, ngokwesibonelo, ukuqeqesha imidlwane (ngokwesibonelo, ukushiya imibhede yabo, amanzi, amathoyizi kanye nokudla epaki). Futhi Ziwusizo kakhulu ezinjeni ezindala, ngoba ngepaki singashiya ikhaya ngokuthulaSizokwazi ukuthi uLassie akazange aphathe amakhushini embhedeni, noma izinkinobho ezincane azizange ziwele etafuleni lasegumbini lokudlela.
Ekugcineni, ziwusizo olukhulu uma wenza impilo eningi phesheya. Ngokwesibonelo, Zilusizo olukhulu emakamu, lapho ungalawula khona inja ngaso sonke isikhathi, kepha futhi zilungele ukuchitha usuku olwandle noma ukushiya inja ngejubane layo engadini.
Ungakhohlwa ukuthi izinja, njengazo zonke izilwane, zidinga isikhathi sokugijima futhi zikhulule amandla. Ngakho-ke, kufanele usebenzise ipaki ngesilinganiso futhi ungayishiyi ikhiyiwe amahora amaningi. Lokhu kuzosiza ukugcina impilo enhle ngokomzimba nangokwengqondo.
Amathiphu lapho ukhetha ipaki yenja yakho
Yize kungekho ukwehluka okuningi uma kukhulunywa ngokukhetha izinhlobo ezahlukahlukene zamapaki (ngokuvamile kunezimbili: ezendwangu nezensimbi), ungakwazi cabanga ngochungechunge lwezincomo lapho ukhetha okukodwa noma okunye. Isibonelo:
Uzoyibeka kuphi ipaki
Into yokuqala okufanele uzibuze yona lapho uthenga noma uqhathanisa amapaki wezinja ahlukahlukene kulapho uzobeka khona ipaki. A) Yebo, uma uzoyibeka ngaphandle, kungcono ukhethe eyensimbi. Imvamisa lolu hlobo lwepaki selivele luza nezikhonkwane ongacwila enhlabathini ukwenza isakhiwo sizinze kakhudlwana.
Nokho, uma uzoba nayo ngaphakathi, inketho yendwangu ilungilenjengoba ingekho ingozi yokuklwebha phansi. Amapaki amaningi endwangu akhiwe ngezinto ezingamelana nezakhiwo zensimbi ezinikezela uzinzo esibayeni.
Futhi cabanga lokho isimo sezulu ngesinye isici esibalulekile. Ngenkathi ukudlala kwensimbi ilanga lingawa ngokuphelele, izindawo zokudlala zokugqoka zingabanda kancane futhi zinikeze umthunzi (empeleni, ungacabangi ngisho nokushiya isilwane sakho elangeni eligcwele).
Usayizi wenja yakho
Ngokusobala, ubukhulu benja yakho (nendawo lapho uzoshiya khona ipaki) kuzoba ngenye yezinto ezizothinta kakhulu lapho ukhetha imodeli noma enye ye-corral. Noma, ngokungafani nabathwali, awudingi ukuba nobulukhuni kakhulu, Yebo, kunconywa kakhulu ukuthi unikeze inja isikhala esanele. Kunconywa ikakhulukazi uma uzochitha isikhathi esiningi lapho usuku lonke, ukuze ungazizwa uvinjelwe. Kufanele futhi ucabangele konke ohlela ukukubeka ngaphakathi kwepaki: ukudla, amanzi, amathoyizi, umbhede ...
Uhlamvu lwesilwane sakho sasekhaya
Izilwane ezifuywayo zingaba nezinhlamvu ezihluke kakhulu, njengabantu. Kungakho indlela yokuba inja yakho izophinde ibe nomthelela lapho uthola ipaki. Isibonelo, izinja ezimatasa kakhulu zidinga ipaki ebanzi ngangokunokwenzeka ukuze ingazizwa ivalelwe. Ngokuphambene nalokho, labo abathanda ukuluma bangadinga ipaki elinendwangu engazweli ...
Ekugcineni, okuthandwa nguwe uqobo kuzoba ngesinye isici okufanele usicabangele. Uma uthanda ukuthi amapaki kube lula ukugoqwa ngangokunokwenzeka, khetha indwangu eyodwa, ngenkathi into yakho kufanele ibe yicaba ngangokunokwenzeka ukuyigcina, izinsimbi ziyindlela enhle. Futhi, usuvele ungene emkhakheni wezinto ozithandayo, ungathola futhi nokukhethwa okukhulu kwemibala ehlukene ngisho neminye enezimo ezihlukile.
Ungathenga kuphi amapaki ezinja
Amapaki ezinja akuwona umkhiqizo ojwayelekile ongawuthola kunoma yisiphi isitolo noma esitolo. Noma kunjalo, ezindaweni ezingaphezulu noma ezingaphansi akunzima ukuthola izinhlobo ezinhle zamamodeli:
Vele, ku AmazonInkosi yezinto sezizonke, unolunye lwezinketho ezinkulu kakhulu zezibaya zezinja. Okuhle ukuthi inqubomgomo yabo yokubuyisa inhle kakhulu, ngakho-ke ungathenga ngaphandle kokwesaba ukuthi, uma ingahambisani nezidingo zakho, bazoyishintsha noma babuyisele imali yepaki. Ngaphezu kwalokho, uma ubhalisile bakuthumela kuwe mahhala (into okufanele uyicabangele kakhulu kumaphakeji amakhulu njengale).
Futhi kuyindlela enhle izitolo zezilwane, kungaba ku-inthanethi noma ngokomzimba, njengeTiendaAnimal noma iZooplus. Okuhle ukuthi bayakuqinisekisa ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme egxile kakhulu ezidingweni zesilwane sakho, kanye namamodeli ahlukile nomehluko ohluke kakhulu kuma-giants afana ne-Amazon.
Ekugcineni, ungathola futhi amapeni wesilwane sakho ezindaweni ezinjenge U-Leroy Merlin noma abanye ochwepheshe kwimikhiqizo ye-DIY nengadi, lapho, ngaphandle kokukhetha kahle izilwane ezifuywayo (futhi ikakhulukazi ezihlose impilo yakwelinye izwe), unethuba lokukwazi ukuvakashela isitolo futhi uzibonele mathupha ukuthi ipaki injani ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuyithenga noma cha.
Ukubuyekezwa kwamapaki wezinja zasekhaya
Ekugcineni, uma ufuna ukubheka imibono yamapaki ezinja ekhaya, ezitolo lapho zidayiswa khona kuningi (yize sikukhethele okuhle kakhulu). Akungabazeki amapaki ezinja ayindlela enconyelwe kakhulu ongayisebenzisa uma ungekho ekhaya, ufuna ukuthi inja ilawulwe ngaphandle kokuyikhohlwa noma ngisho ukuyithatha ekukhuphukeni noma ekhempini. Ngaphezu kwalokho, uma uhlinzekela ipaki ngokudla, amanzi, indawo yokuphumula namathoyizi, inja akudingeki ibhoreke. Ngaphezu kwalokho, ungahle ubone i-corral njengohlobo lwekhaya lesibili, indawo yakho ekhethekile.
Kodwa-ke, njengoba sishilo ngaphambili, Kumele futhi kubhekwe ukuthi amapaki ayithuluzi nokuthi akufanele abe ukuphela kwendawo lapho inja ihamba khonanjengoba badinga ukuzivocavoca umzimba ukuze bahlale bejabule futhi benempilo.
Sithemba ukuthi uthande lokhu kukhethwa kwamapaki wezinja futhi wakusiza lapho ukhetha eyodwa evumelana nezidingo zakho nalezo zenja yakho. Sitshele, bewazi lezi zinhlobo? Usebenzisa kanjani ipaki? Ngabe ucabanga ukuthi sishiye noma yini ukuze sincome? Khumbula ukuthi ungasitshela ukuthi ufunani kumazwana!
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Izindawo ezihamba phambili zezinja
Iziklufu zezinwele ezihamba phambili zezinja
Izinja ezingaba yingozi: uhlu lwezinhlobo ngeke lusaba namandla